HomeWararka Ciyaaraha MaantaReal madrid oo war kasoo saartay dhaawicii soo gaaray Lucas Vasquez.
April 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Xilli ciyaareedkii Lucas Vazquez ayaa soo gabagaboobay iyadoo Real Madrid ay garaacday Barcelona habeenkii sabtida ee Clasico, waxaana laga yaabaa inay tahay kulankiisii ugu dambeeyay ee kooxda xilli ciyaareedkan.
Xiddiga reer Galician ayaa ku lug lahaa isku dhac uu la galay Sergio Busquets, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona uu xilli dambe soo galay tartan, taasoo keentay in ninka Real Madrid utility uu si xun u xirto “Kadib tijaabooyin lagu sameeyay maanta Lucas Vazquez oo ay soo saareen Adeegyada Caafimaadka ee Real Madrid, waxaa laga helay cudurka muruqa lugta dambe ee jilibka bidix,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay Real Madrid subaxnimadii Axada.
Soo kabsashadiisa ayaa sii wadi doonta in la qiimeeyo Kooxda ayaan waqti cayiman gelin qoraalkooda, laakiin Lucas wuxuu u maqnaan doonaa wixii ka haray xilli ciyaareedkii 2020/21, taasoo la micno ah inuusan ciyaari doonin qeyb kale madaama Los Blancos ay raadineyso horyaal labaad oo isku xigta LaLiga Santander iyo weliba guul kale oo Champions League ah Iyada oo kaliya 7 kulan oo LaLiga Santander ah ay u harsan tahay in la ciyaaro, iyo wareega quarter-finalka Champions League ee durbaba la soo gabagabeynayo,.
ku soo laabashada garoonka xilli ciyaareedkan waa wax aad u badan oo la filan karo Qandaraaska Lucas ee Real Madrid wuxuu dhacayaa xagaagan mustaqbalkiisuna wuxuu ku sii jiraa hawada. Waxa uu muhiim u ahaa Zinedine Zidane xilli ciyaareedkan, isagoo buuxinaya boosas badan oo kooxda heysata horyaalka Spain, waxaana uu ka mid ahaa ciyaartoydii ugu caansanaa ee Los Blancos.
Xaqiiqdii, qaabkii Lucas wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan oo xitaa wuxuu u tartamayay xulka Luis Enrique ee Spain ee dib u dhaca ku yimid European Championship Shaki ku saabsan Valderde Sida haddii maqnaanshaha Lucas uusan aheyn war xun oo ku filan ka dib Clasico, Fede Valverde ayaa shaki ku jira lugta labaad ee ay ka horyimaadeen Liverpool garoonka Anfield.
Xiddiga reer Uruguay ayaa ku qasbanaaday inuu ka hor yimaado Barcelona, calaamadaha horena waxay muujinayaan inuusan taam u noqon doonin inuu wajaho kooxda heysata horyaalnimada Ingiriiska.